गर्मीमा पुदिना किन खाने?
गर्मी मौसममा पुदीना सेवन गर्नु लाभदायक हुन्छ । यसले शरीरलाई शीतल राख्न मद्दत गर्छ । पुदिनालाई औषधिको रुपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । निम्न शारीरि समस्य भएको बेला यसको सेवन लाभदायक हुन्छ ।
१. पेट खराब भएमा वा पेट फुलेमा पुदिनाको सेवन गर्नाले तुरुन्तै....
बालबालिकालाई सिकाउनै पर्ने कुराहरु
अभिभावकहरुले बालबालिकालाई शारीरिक एवम मानसिक रुपमा स्वस्थ राख्नाको लागि यस्ता बानीहरु सानैदेखि सीकाउनै पर्ने हुन्छ ।
आयुर्वेदमा वर्णन गरिएअनुसार आफ्नो दैनिक कार्यमा संलग्न हुनुभन्दा अगाडि केही घन्टा सबेरै हिँड्नाले दिनभर सक्रिय र खुसी रहन सकिन्छ । समयमै सुत्नाले र....
घमौरा किन आउँछ, कसरी जोगिने ?
गर्मी मौसममा धेरै जसो मानिसलाई घमौरा आउने समस्याले सताउँछ । गर्मी वातावरण, पसिना, बाक्लो लुगा, ज्वरो आउँदा घमौरा आउन सक्छन् । घमौरा धेरैजसो घाँटीमा, काखीमा वा कापमा देखिने भएपनि कहिलेकाहिँ अन्य भागमा पनि देखिन सक्छन् । फहोेर खेल्ने, हातखुट्टा नियमित सफा नगर्ने, नियमित ननुहाउने र....
स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा के के गरे गगन थापाले ?
काठमाडौं । स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले छोटो समयमा पनि आफुले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा दीर्घकालिन महत्व राख्ने निर्णय गर्न सफल भएको दाबी गरेका छन् । आईतबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री थापाले नयाँ संविधान अनुसार आवश्यक नितिगत, कानुनी र संरचनागत व्यवस्थाको अभावमा पनि आफुले छोटो समयमै स्वाथ्य क्षेत्रमा....
प्रजनन् सम्बन्धी विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्ने
काठमाडौं । स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी विधेयक १५ दिनभित्र व्यवस्थापिका–संसदमा पेश गर्ने तयारी गरेको छ । संविधानको मौलिक हकमा व्यवस्था गरिएको प्रजनन् अधिकारलाई कानुनतः स्थापित गर्न र नेपालको यससम्बन्धी प्रतिबद्धता पूरा गर्न विधेयक प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको हो ।
विधेयक तयार गर्न मन्त्रिपरिषद्ले....
अनुहारका दागहरु हटाउने उत्तम उपायहरु
अनुहारका विभिन्न दाग हटाउन निम्न उपायहरु अपनाउनुहोस् । कागती, दूध, बदाम, चन्दनजस्ता सामाग्रीको प्रयोग गरेर अनुहारको दाग धब्बा हटाउन सकिन्छ ।
कागतीको रसमा ब्लिचिङ गुण हुन्छ । यसले कालो धब्बा हटाउन मद्दत गर्छ । यसका लागि कागती काटेर अनुहारमा दल्ने र केही समय त्यसै....
विद्यालयमा नर्स राखिने पक्का
काठमाडौं । अब निजी विद्यालयहरुमा नर्स राखिने भएको छ । साथै पेय पदार्थ र जंक फुडमा पनि प्रतिबन्ध लाग्ने भएको छ । यस विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र प्याब्सनबीच सम्झौता भएको हो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका तर्फबाट राष्ट्रिय स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सूचना केन्द्रका निर्देशक बद्रीबहादुर खड्का....
काजु एक प्रकारको मसला हो । विभिन्न मिष्ठान्न बनाउँदा यसको प्रयोग गरिन्छ । काजुको स्वाद मिठो हुन्छ त्यसैले बच्चादेखि बुढासम्मले काजु खान रुचाउँछन् । काजु स्वास्थ्यको लागि निकै लाभदायी मानिन्छ । बढी मूल्य पर्ने काजुका फाइदा पनि मूल्यवान नै छन् । काजु खानुका केही फाइदा....
ब्रेन ट्युमरको लक्षण
अब क्यान्सर, मुटुरोग, मृगौलाको उपचार निःशुल्क
काठमाडौं । अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महाराले डायलिस सेवा, क्यान्सर, मुटु, मृगौला रोगको निःशुल्क उपचार गरिने व्यवस्था गरेको बताएका छन् ।
ब्यवस्थापिका संसदमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री महराले तीन वर्षभित्र सबै नेपालीको स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम ल्याइएको बताए ।
यस्तै वीर अस्पताललाई....